Sangano Re Zimbabwe Environmental Law Association Roshoropodza Kusvibiswa Kurikuitwa Mvura Yemuna Save Ne Dzimwe Nzizi Nemakambani Emangoda
Chikunguru 06, 2012
Sangano re Zimbabwe Environmental Law Association, (ZELA), rinoti harisi kufara nekusvibiswa kuri kuitwa mvura yemuna save, pamwe nenzizi dzinodira murwizi urwu. ZELA inoti mishonga iri kushandiswa nemakambani anochera mangonda, pamwe nevanhu vari kuonga goridhe, iri kuvhiringa mvura yemunzizi idzi.
Imwe nhengo ye ZELA, va Shamiso Mutisi, vanoti sangano ravo rakakokwa nevagari vemudunhu re Birchenough Bridge kuti vaongoorore mvura yemuna Save na Odzi. Vamutisi vanoti vapedza ongororo yavo nhasi.
VaMutisi vanoti vagari vemunharaunda iyi varikushushikana nekusvipa kwemvura yemunzizi zvirikuita kuti vashaye mvura yekunwa yakachena kana yekushandisa pakuwacha nekugeza. Vagari vemunharaunda iyi vanonzi vavekutotya kushandisa mvura iyi sezvo vamwe varikuti vakashandisa mvura iyi pakugeza vari kuvaviwa. Vamwe vane magadheni munzvimbo iyi vanonzi vave kutotya kushandisa mvura iyi pakudiridza zvirimwa zvavo sezvo vasiri kuziva kuti ingavarwarise here.
VaMutisi vanoti vakatobatana navanamazvikokota ezve kuwongorora mvura kuti vanzve mamiriro akaita mvura yemunharaunda umu.
Kunyangwe zvazvo sangano ravo rapedza wongororo vavo nhasi, vaMutisi vanoti vachayedza kuzeya nemakambani makuru ari kuita zvemangoda vachirasira mvura inonzi inemushonga wekuchenesa mangoda izvo zvirikukonzera dambudziko reku Birchenough Bridge.
VaMutisi vanoti nyangwe zvazvo pane mitemo inodzivirira zviitiko zvakadai makambani mazhinji haasi kutevedzera mitemo iyi.
Hurukuro NaVa Shamiso Mutisi